စားကြပါဦး ( ဧည့်ခံပါရစေ … ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စားကြပါဦး ( ဧည့်ခံပါရစေ … )
စားကြပါဦး ( ဧည့်ခံပါရစေ … )
Posted by lulain on Jun 10, 2011 in Copy/Paste | 17 comments
တခါတလေ မြန်မာပြည်က အစားစာတွေကိုလွမ်းတယ်။ တခါတလေ မြန်မာဟင်းတွေချက်စားဖြစ်တယ်။ တခါတလေ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်း စားချင်တာတွေ စားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အစားသောက်ကောင်း စားရင်မိတ်ဆွေကောင်းကို သတိရတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ … အခုစဉ်းစားမိပြီး တော့ပစ်လေးတစ်ခု ဖွင့်ပါမယ်။ အားလုံးကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ၀ိုင်းအားပေးကြပါဦး ခင်ဗျ။
မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ – ဇီးထုပ်
အထဲမှာ ၀က်သားပေါင်း၊ ၀က်အူချောင်း၊ ဆားဘဲဥ တခြမ်းပါတယ်။
ကောင်းချက်က ပြောမနေနဲ့..။ အဓိက က အချဉ်ပဲဗျ သိလား။ ငရုတ်ဆီလေးနဲ့ ငံပြာရည်လေးနဲ့ အချိုးကျ ရောထားတဲ့ အချဉ်က အရသာကို ဖြစ်စေတာပဲ။
ဒီတိုင်း စားမလား.. ကောင်းတယ်။
သူ့ မန်ကျည်းနှစ် အချဉ်လေးနဲ့ စိမ်ပြီး စားမလား.. ပိုကောင်းတယ်။
ကြိုက်တတ်ရာလေးနဲ့ မြည်းလို့ကတော့.. ဟဲဟဲ အကောင်းဆုံးပဲဗျာ.။
ပြင်သစ်ပြည် ပါရီမြို့ရဲ့ ရှောင်ဇလီဇေ လမ်းမကြီးထက်မှာ.. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဝိုင်နီနဲ့ ကဗီယာငါးဥကို ရနိုင်ပေမယ့်.. ဒါလေးတော့ မရဘူးဗျာ.. သေချာတယ်
အလုံမီးရထားလမ်းကြားက ကိုကျော်လှဘီအီးနဲ့ ယခုအမြည်းဟာလဲ.. ဟဲဟဲ..
အားပေးကြပါ။ ဟိုဖက်က တုတ်ထိုးထားတဲ့ ငါးပါးဟက်လေးက လှုပ်နေသေးတယ်။ ဂျပန်လိုဆိုရင် “ ဆာရှိမိ – တဲရှောကု” လို့ခေါ်တယ်။ ဆာရှိမိ၊ ထမင်းဖြူ၊ ချဉ်ဖတ်နည်းနည်း၊ မိဆောဟင်းချို လေးမျိုးပါတယ်။
လားရှိုးက ၀က်သားချဉ်လေး စားစေချင်လွန်းလို့ ယူလာတယ်ဗျား
အပေါ်က နံနံပင်လေးအုပ်ထားပြီး ဂျူးမြစ်လေးတွေ ရေစင်စင်ဆေးပြီး တဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ စားရတာ တမျိုးလေးထူးတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်လေးကလည်း အပေါ်က ဆမ်းထားသေးသဗျ။ ငရုတ်သီးဟင်းအဆီလေးဆမ်းထားတော့ စားရတာ တယ်မိုက်ဗျာ။ စားကြဦး ဒေသထွက်အစားအစာဆိုတာ စားရခဲတယ်ဗျ….
ရော့ ဒါလေးက ၀က်သားတုတ်ထိုးဗျ
ဆိုင်ရှင် ရှုရှုးသွားပေါက်နေတုန်း အလစ်မှာ သူမသိအောင် ဘန်းလိုက် မ လာတာဗျ။
အလယ်မှာ ၀က်ဦးနှောက်ထည့်ထားတဲ့ ခွက်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ ကြိုက်ရင်ယူစားဗျာ။
အဆီပိတ်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ကြောင့် မဟုတ်ဘူးနော်…
၀က်ဖင်မဲ ရောဂါရမှာကြောက်ရင်တော့ မစားနဲပေါ့
ဒါလေးက ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းခေါ်မလား ဒါမှမဟုတ် ဟယ်လ်ပင်လမ်းခေါ်လား အဲဒီလမ်းမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး Feel မြန်မာထမင်းဆိုင်က ငါးပိရည်နဲ့ တို့စရာတွေ
ဒီတို့စရာခွက်ကတော့ မေမြို့ နာရီစင်နားက မမကြီးထမင်းဆိုင်မှာ စားတုန်းက လာချပေးတဲ့ တို့စရာခွက်
ဆတ်သားခြောက်ကို ပွဲမှာတော့မှ ဆီပူပူထဲကို ထည့်ပြီး ကျော်ပေးသဗျ။ စားလိုက်ရင် ရွနေတာပဲ။ ကောက်ညှင်းပေါင်းလေးကလည်း စီးနေတာပဲ။ နှမ်းထောင်းလေးကလည်း ဖြူးထားလိုက်သေးတယ်။ သူများကျွေးမလို့ဟာ မအောင့်နိုင်လို့ နည်းနည်း နှိုက်စားလိုက်မိတယ်ဗျာ။ ငချိပ်ပေါင်းလေးများ စားလိုက်တာ ဖောက်ခနဲ ဖောက်ခနဲ မြည်သံတောင် ကြားရသလိုပဲ။ ကောက်ညှင်းပေါင်းက တ၀က်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ မြန်မြန်လာရင်တော့ မီဦးမယ်။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ သွားရည်တောင် ကျလာပြီ။ ရှလွတ်….. ။ နောက်ကျရင်တော့ ကုန်ပြီပဲနော်။
ဘုရားပွဲများ ရှိပလား.. ဆိုမှဖြင့် ဒါမျိုးဟာ ပွဲဈေးလျှောက်အပြီးမှာ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ သိပ် ကောင်းပေါ့ဗျာ
ဝင်ရောက် သုံးဆောင်သွားပါတယ် ဗိုက်ဆာနေတဲ့ အချိန်မို့လို့လားမသိဘူး တော်တော်လေး စားကောင်းတယ် …. …..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လာလည်တဲ့ အတွက်
လာကြည့်တာ အဆာမပြေပဲ ပိုဆာသွားတယ်
ရုံးဆင်းခါနီးမှ ကြည့် လိုက်မိတာ ငါ့အမှား ..
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ ထိ မအောင့် နိုင်ရင် တော့ ဆူးလေက တရာတန် မုန့်ဟင်းနဲ့ ငြားရတော့မှာပဲ။
ဗိုက်တောင်ပြည့်သွားပြီ အမှန်တော့ အဆာလွန်သွားလို့
ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် သားရေယို လာပြီ
၀က်သားကိုတော့လုံးဝ မစားဘူး ဒုတ်ထိုးတော့ သိပ်ကြိုက်တယ် ဘဲဥ ပေါင်းလဲ ကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ အရေသောက်ပါတဲ့ ဆိုင်ကိုတော့မကြိုက်ဘူး..အဲဒီ နေရာလေးပြောပြနိင်မလား ခင်ဗျ………..
ဒီလောက် စုံစေ့အောင် ဘယ်လိုများ စုစည်းထားပါလိမ့်။ အပြင်ရောက်နေတဲ့ လူတွေတော့ မသိဘူး။ ဒီမှာနေတဲ့ လူတွေတောင် ထိုင်ကြည့်ရင်း သရေကျလာပြီ။ ;P
bike sar nay par tel soooooo !!!
ဟင်း.. ရှေ့ကလူတွေ စားလို့ကုန်ပြီလား. မသိဘူး.. ငါ့အတွက်ကျန်ပါ့မလား..:D